My Dear Diary » ရင်ဖွင့်ချင်သှ် မန်းဂဇက်ဆီ	14
kai says: အဲဒီဘာသာတရားဆိုတာတွေကို.. မေ့ထားလိုက်..။
ကောင်းတဲ့လောကသစ်ကို မြင်ရလိမ့်မယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 115
Tawwin Pan says: ထင်းခွေမကြုံရေခပ်ကြုံမယ် ဆိုပြီး အငြိုးတွေနဲ့ပြောတာကြုံဖူးတယ်
kai says: မိုဒယ်မြင့်သွားအောင်..
နောက်တာနော.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2
pho chut says: ရှင်​ကြီး ကျားထက်​ မဆိုးပါဘု
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ရွာသားအသစ်ပေါ့နော်။ ကြိုဆိုပါတယ် ။ မန်းဂဇက်မှာ လူတော်တွေချည်းနေတယ်။ ရွာထဲမှာ ပျော်ရမှာပါ ကဖိုးချွတ်ရေ
pho chut says: မသစ်​ပါဘူးဗျာ ​နိဂိမိ၇၇ ပါ ရွာထဲကို မဝင်​တာ နှစ်​နဲ့ချီ​နေ​တော့ ညက ပြန်​ဝင်​ကြည့်​တာ အရင်​က အိုင်​ဒီ ပါစ်​​ဝေါ့ နဲ့ ဝင်​မရလို့ fb နဲ့ ဝင်​လိုက်​တာ ဘယ့်​နှယ်​ ဖြစ်​ပြီး Pho Chut လို့ သူ့ အလိုလို ​ပေါ်လာမှန်းမသိဘူး
kai says: အဟမ်း..
ဦးကြောင်ကြီး says: ဖူးလစ်ရ်ှဂဲကို မူးယစ်စွဲနေပြီ ဒူးဆစ်လဲလို့ ထူးkissချွဲပါရစေ…
Foolish Girl says: ဦးကြောင်ကြီး မူးအောင်တီး ထူးအောင်ကြီးတဲ့ ဟောဒီက ပဲပြုပ်………………………. :P
အောင် မိုးသူ says: ရွှေနားကပ် အရောင်နဲ့ ပါးသိပ်မပြောင်နဲ့အေ….
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .သေချင်တဲ့ကျားတောပြောင်း..ဖြစ်မှာစိုးလို့ ဒီရွာကမပြောင်းတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1084
nigimi77 says: ရပြီ ကိုခိုင်​
Thint Aye Yeik says: ဆယ်ရက်တရားစခန်းထဲ ကတုံး တုံးပြီး ဝင်တုန်းက
ဂျစ်စူ says: လူနေခြုံကြား စိတ်နေဘုံဖျားတဲ့ဗျ